Dumarka uurka leh iyo hargabka doofarada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dumarka Uurka leh oo tixgelin la siinayo marka dadka laga talaalayo dureyga doofaaradaFoto: Ingvar Karmhed
Svininfluensa farligare för gravida kvinnor
Dumarka uurka leh iyo hargabka doofarada
La daabacay fredag 31 juli 2009 kl 15.54
Warshada soo saarta daawada ee dalkan ayaa sheegtay iney jirto sabab deg deg ah oo mudnaan siineysa in dumarka uurka leh laga hormariyo dadka kale marka la gaaro waqtiga laga talaalayo waxa loogu yeero cudurka dilaaga ah ee Hargabka doofaarada. Sidaasi waxaa tilmaantay daraasad caafimaad oo cusub oo sheegaya iney jirto xaalad qatar ahi oo dumarkaasi keeni karto in cudurkaasi uga dhago nugul yihiin dadka intiisa kale.
Jan Lilemark oo ah barafasoor ka tirsan warshada daawada waxa uu sheegay inuusan la yaabaneyn natiijada daraasadaasi.
”Sida guud ahaaneed dumarka uurka leh waa kuwo la yareeyey talaalkooda difaaca sababo la xirriira uurkooda, waxaa jira marka sabab loo siinayo mudnaan dumarka xaamilooyinka ah. Waana mid mid haboon in la soo qadimo ama ay timaado”
Daraasadan ameerikaan ah ayaa waxey muujineysaa in afar jibaar ay dumarka uurka leh qarka u saaran yihiin in si darran cudurkaasi u asiibo,waxaana taas u sii dheer iney u geeriyoodaan. Jan waxa uu sheegay in dumarka doonaya iney iska talaalaan aysan ka shakin sameynta tallaalkaasi islamarkaasina aanu aheyn mid dhib u keenaya ilmaha caloosha ku jira.
“ Maya, qatartu waxey u tahay carruurta marka hooyadu xumad xoogan qabato oo influensadaasi a. Laakin ka talaalista cudurkaan ma ahan mid qatar ku ah carruurta”